Qaabkan cusub ee polymerization wuxuu albaabka u furayaa daaha ka hortagga maqaarka oo waxtar badan leh
Isku soo wada duuboo sheyga noolaha ah dusha sare ayaa caqabad ku ah maraakiibta dhoofinta iyo warshadaha biomedical Qaar ka mid ah boodhadhka polymer ee ka hortagga wasakhda wasakhda ah ayaa mari kara xaalufinta oksidheer ee biyaha badda, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo aan waxtar lahayn muddo ka dib.
Dahaarka polymer ee qaboojiya dhismooyinka
Injineeradu waxay soo saareen waxqabadka sare ee PDRC (qaboojinta shucaaca maalinlaha ah) polymer leh nusqaanno hawo ah oo ka bilaaban kara nanometer-ka ilaa miniscels-ka oo loo adeegsan karo qaboojiye hawo kacsan oo loogu talagalay saqafyada sare, dhismooyinka, taangiyada biyaha, gawaarida iyo xitaa dayax gacmeedka - wax kasta oo ca ...
Dahaar loogu talagalay dhalinta tamarta qorraxda oo beddeli karta silikoonka
Waqtigan xaadirka ah, nooc ka mid ah daaha "sixirka" ayaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo "silicon" dhalinta tamarta qorraxda.Haddii ay ku dhacdo suuqa, waxay si weyn u yareyn kartaa qiimaha tamarta qorraxda waxayna keenaysaa tikniyoolajiyadda isticmaalka maalin kasta. Isticmaalka baalayaasha cadceedda si ay u nuugaan falaaraha qorraxda, a ...
Alwaaxa Xaydha Alwaaxda Oo Aan Ciddiyaha Ama Boolal Lahayn
Ciridaynta ayaa qayb muhiim ah ka ah mashaariic badan oo alwaax ku saleysan. Laakiin go'aaminta xabagta ugufiican ee shaqadaada gaarka ah marwalba ma sahlana. Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u go'aansato xabagta qoryaha ee sida ugu fiican ugu shaqeyn doonta mashruucaaga. Polyvinyl acetate (PVA) xabagta ayaa ah nooca ugu badan ee xabagta looxa. Tani ...
Polyurethane adhesives - xidigta mustaqbalka ee koollada
Silsiladda unugyada 'polyurethane adhesive molecule chain' waxay ka kooban tahay kooxda carbamate (-NHCOO-) ama isocyanate group (-NCO), oo loo qaybiyay polyisocyanate iyo polyurethane laba qaybood. Adhesives Poliurethane, iyadoo loo marayo falcelinta kooxaha isocyanate ee nidaamka iyo walxaha ay ku jiraan hydrogen firfircoon gudaha ama dibedda .. .
Warbixinta Cilmi baarista Epoxy
Warbixinta Cilmi-baarista Suuqa Cusbada ee Epoxy-ka oo ay qaybisay Codsiyada, Juqraafiga, Isbeddellada iyo Saadaasha 2026 Cilmi baarista la cusboonaysiiyay ee ku saabsan Epoxy Resin Industry waa daraasad dhammaystiran oo bixinaysa aragtiyo gaar ah oo ku saabsan ganacsiga Epoxy Resin ee ganacsatada cusub ee suuqa soo gashay iyo ciyaartoy la aasaasay. The ...
Rave dib u eegis
Mar IIBIYO BILAASH AH